Hubannoo miidiyaa lammiilee guddisuu keessatti gahee miidiyaalee. – ኢትዮጵያ ቼክ
Hubannoo miidiyaa lammiilee guddisuu keessatti gahee miidiyaalee.
Bara miidiyaaleen dijitaalaa itti babal’atan kanatti maalummaa miidiyaalee, akkaataa hojii isaaniifi gahee isaanii hubachuun barbaachisaadha.
Kun immoo beekumsa/hubannoo miidiyaa (Media Literacy) jedhamuun beekama.
Beekumsi/hubannoon miidiyaa akkaataa miidiyaaleen odeeffannoo ittiin uummata biraan gahan, odeeffannoon sun maal akka ta’efi akkaataa itti fayyadamasaa hubachuu ofkeessatti qabata.
Beekumsi miidiyaa namootni mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu isaanii haalaan akka fayyadaman akkasumas burjaajiiwwan gama miidiyaaleetiin raawwataman akka ofirraa ittisan gargaara.
Namni beekumsa/hubannoo miidiyaa qabu icciitii dhuunfaa isaa eeggachuu akkasumas odeeffannoowwan sobaafi yakkoota gama intarneetaan raawwataman (cybercrimes) ofirraa ittisuu danda’a.
Kunis odeeffannoo gama miidiyaaleetiin darban ofitti fudhachuun dura odeeffannichi kan eenyu akka ta’e, qabiyyee odeeffannichaa, namni odeeffannicha himu eenyu akka ta’e (seenduubee miidiyichaa), ergaan sun maaliif tamsa’aa akka jiru, dhugummaa odeeffannichaa akkasumas faayidaa namni odeeffannicha tamsaasu argatu xiinxala jechuudha.
Beekumsa miidiyaa uummataa guddisuu keessatti gaheen miidiyaalee maal ta’uu qaba?
Hawaasni waa’ee miidiyaalee beekumsa/hubannoo akka qabaatu gama gochuutiin mootummaan, dhaabbileen miti mootummaa, miidiyaaleen dhaabbileen barnootaafi qaamoleen miidiyaalee to’atan gahee mataa isaanii qabu.
Keessattuu miidiyaaleen hubannoo hawaasni dhimma miidiyaafi odeeffannoo irratti qabu gama guddisuutiin gahee olaanaa qabu.
Gaheen miidiyaalee kunis hawaasni waa’ee miidiyaalee akka hubatufi beeku gochuurraa eegala.
Miidiyaaleen namootni qabiyyee miidiyaa tokko ofitti osoo hinfudhatin dura akkamiin xiinxaluu akka qaban barsiisuu qabu.
Kana malees miidiyaaleen dhaqabummaa bal’aa qabanitti fayyadamuun sagantaawwan beekumsa/hubannoo hawaasaa guddisan qopheessuun hawaasaaf dhiyeessuu danda’u.
Akka fakkeenyaattis maalummaa beekumsa miidiyaa, dhiibbaa odeeffannoon sobaa qaqqabsiisu, maloota odeeffannoowwan sobaa adda ittiin baafatanfi kunneen biroo irratti sagantaalee qopheessuun tamsaasuu danda’u.
Kunis jabana intarneetiifi miidiyaaleen hawaasummaa itti babal’atan kanatti namootni waa’ee miidiyaalee hubannoo gahaa akka qabaatanfi itti fayyadamni isaaniis gaarii akka ta’u taasisa.